गुल्मीमा ३ सय ८ क्षयरोगका बिरामी – Gulmiews
गुल्मीमा ३ सय ८ क्षयरोगका बिरामी
१२ चैत्र २०७२, शुक्रबार १५:३१ Sanju Kauchha
गुल्मी, चैत ११ । गुल्मी जिल्लामा ३ सय ८ क्षयरोगका बिरामी रहेका छन् । महिला ९५ र पुरुष २१३ गरी ३ सय ८ जनाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका उपचार केन्द्र मार्फत डट्स विधिबाट औषधी खाइरहेका छन् ।
जस अन्तरगत खकारमा कुटाण देखिएका महिला ३२ र पुरुष ८५ गरी १ सय १७ जना रहेका छन् । पुन उपचारमा आएका महिला ४ जना र पुरुष २० जना गरी २४ जना, खकारमा किटाणु नदेखिएका फोक्सो क्षयरोगका बिरामी महिला १७ र पुरुष ४४ गरी ६१ ज्ना रहेका छन् । त्यस्तै शरिरका अन्य भागमा यो रोग भएका महिला ४२ र पुरुष ६४ गरी १ सय २८ जना रहेको क्षयरोग निवारण संस्था गुल्मीका सचिव जगन्नाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा तम्घास, वामी, तुराङ. रुरु, जोहाङ्ग, शान्तिपुर, श्रृङ्गा, वडागाउँ, बलिथुम, दरवारदेस्थिान र खज्र्याङ्गमा डटस विधिबाट उपचार गर्ने उपचार केन्द्रहरु रहेका छन् । त्यस्तै गुल्मीको खकारमा पोजेटिभ बिरामी पत्ता लगाउने दर ८४ प्रतिशत, सफल उपचार दर ९२ प्रतिशत रहेको क्षयरोग निवारण संस्था गुल्मीले जनाएको छ । नियमित औषधी सेवन गरेमा निको हुने क्षयरोगका कारण विश्वमा हरेक वर्ष १५ लाखको मृत्यु हुने गरेको छ भने विश्वमा हरेक वर्ष ९० लाख नयाँ क्षयरोगी देखापर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ४५ हजार नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेका छन् भने ३० हजारले मात्र स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् ।
नेपालमा ८० हजार ५० जना क्षयरोगी भएको सरकारी तथ्यांक छ । नेपालमा वर्षेनी ५ देखि ७ हजार क्षयरोगीको मृत्यु हुने गरेको छ । क्षयरोग माईकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामको ब्याक्टेरियाका कारण लाग्ने रोग हो । श्वासप्रस्वासका माध्यमबाट सजिलै सर्ने क्षयरोगको संक्रमण मधुमेह, एचआईभी, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर जस्ता प्रतिरोध क्षमता कम भएका रोगीलाई छिटो हुन्छ । Comments comments	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	एमाले परित्याग गरी दर्जनौ कार्यकता माओवादीमा प्रवेश